RuNet Watchdog: ‘Mivaralila’ Noho Ny Fandàvan’ny Twitter Tsy Hibahana Ireo Mpanohitra An’i Kremlin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2015 2:39 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, македонски, русский, polski, Español, English
Tahàka ny tsy faly amin'ilay tatitra mangaraharan'ny Twitter, izay mampiseho ny fitomboana be amin'ny fangatahana angon-drakitra mikasika ireo mpampiasa azy sy ny filazàna fanesorana azy avy amin'ny governemanta Rosiana i Roscomnadzor, Ilay toy ny alika mpiandry tanàna amin'ny fifandraisan-davitra Rosiana.
Alexandr Zharov, filohan'ny Roscomnadzor, nilaza tamin'ny mpanao gazety fa “nandà hatrany ny Twitter tsy hanaraka ny fangatahan'ny rafitra ara-pitsaràna Rosiana, isan'izany ireo ikendrena hiadiana amin'ny mahery fihetsika,” ary niteny fa mitondra amin'ny resaka “maha-tò” teny ho an'ny orinasa iray manao fandraharahana ao anatin'i Rosia ny fomba fhetsiky ny Twitter.
Ny mampiasa loha an'i Zharov amin'ilay tsy faneken'ny Twitter dia miainga avy amin'ny hoe hatramin'ny Jona 2014 dia nametraka fangatahana niisa 108 i Rosia momba ny kaontin'ireo mpampiasa azy, nandà tsy hanome vaovao mikasika izany ny Twitter, na iray aza. Tato anatin'ny enimbolana farany ho an'ny taona 2014, 91 ny filazana fanesorana na fibahanana navoakan'ny governemanta Rosiana, nisy roa tamin'izany no nahazo fanohanana avy aminà didim-pitsaràna. 13% tamin'ireo fangatahana ihany no neken'ny Twitter, nanakànana kaonty niisa telo sy namafàna bitsika sivy, saingy notateriny fa “maro no nolaviny ireo fangatahana hampangiana ireo feo mpitsikera ny governemanta Rosiana sy ireo fangatahana hafa hameperana ny fahalalahana maneho hevitra mikasika ny hetsi-panoherana am-pilaminana tao Okraina.”
Nilaza i Zharov avy amin'ny Roscomnadzor, fa “mivaralila” ny alika mpiambina noho ny ataon'ny Twitter mandà ny hibahana “ireo malaza ho mpanohitra ny governemanta Rosiana” ary nolazainy fa ny rantsana mpanao lalàna dia miady hitaky fanazavana avy amin'ny Twitter.
Henjana ny fifandraisana eo amin'ny mpandrindra ny aterineto Rosiana sy ny Twitter ary niditra amin'ny fifampiangàna imasom-bahoaka na dia mbola an-dàlana aza ny fifampiraharahàna, ao anatin'izany ireo atrikasa marobe natao tany Maosko. Nihaona tamin'ny Roscomnadzor ny solontenan'ny Twitter tamin'ny Jona 2014, sy tamin'ny faramparan'ny Desambra 2014, saingy tsy nahitam-bokatra firy ny vokatr'ireo fihaonana natao. Tahàka ny hitohy ho toy ny fangalam-pierin'ny saka sy ny totozy efa nisy azy hatrizay ny fifandraisana misy amin'ny Roscomnadzor sy ny Twitter hatramin'ny anio.
4 andro izayBolgaria